Cinco De Mayo any Meksika: fiaviana sy fety
Mankalaza ny Kolontsaina Meksikana
Ny Cinco de Mayo dia fotoana lavorary hankalaza ny kolontsaina sy ny tantara Meksikana. Ny fisainana mahazatra dia ny hoe Andro fankalazana ny fahaleovantena Meksikana izany , saingy io fialantsasatra lehibe io dia mitranga amin'ny volana septambra. Izany no iray amin'ireo zava-mahagaga momba an'i Cinco de Mayo . Ny fetin'ny 5 Mey dia nankalaza ny ady teo amin'ny hery Meksikana sy Frantsay izay nitranga teo ivelan'ny tanànan'i Puebla tamin'ny taona 1862.
Tamin'io fotoana io, nandresy ny tafika frantsay lehibe kokoa sy matanjaka tsara kokoa ireo Meksikana. Ity fandresena tsy azo ihodivirana ity dia loharanom-pireharehana ho an'ireo Meksikana ary tsaroany isan-taona amin'ny tsingerintaonan'ny ady.
Origine et histoire de Cinco de Mayo
Inona àry no nitranga tamin'ny fifandonana teo amin'i Meksika sy Frantsa? Tamin'ny taona 1861 dia niatrika olana goavana ara-toekarena i Mexico ary ny Filoha Benito Juarez dia nanapa-kevitra ny hampiato tsy ara-potoana ny fandoavana ny trosa ivelany mba hiatrehana ny toe-bola anatiny. Ireo firenena any Meksika dia trosa, Espaina, Angletera ary Frantsa, niahiahy momba ny fandoavan'izy ireo ary nalefa delegasiona tany Meksika mba hanombanana ny zava-misy. I Juarez dia afaka nanapa-kevitra diplomatika ny olana tamin'ny Espana sy Grande-Bretagne, ary dia nisintaka izy ireo. Ny Frantsay anefa dia nanana drafitra hafa.
Napoleon III, nahatsikaritra ny maha-zava-dehibe ny tanànan'i Meksika ho mpifanila amin'ny hery mitombo any Etazonia, dia nanapa-kevitra fa mety hitondra an'i Meksika ho fanjakana iray izay azony fehezina.
Nanapa-kevitra ny handefa ny havany lavitra, Maximilian avy ao Hapsburg, izy mba ho lasa emperora ary hitondra an'i Meksika manohana ny tafika Frantsay.
Ny tafika frantsay dia natoky fa ho afaka handresy ireo Meksikana izy ireo nefa tsy nahitana fahasahiranana loatra, nefa dia gaga tany Puebla, raha toa ka afaka nandresy azy ireo tamin'ny May 5th, 1862 ny andian-tafika Meksikana, tarihan'ny Jeneraly Ignacio Zaragoza.
Mbola lavitra ihany anefa ny ady. Nisy trozona betsaka avy amin'ny tafika frantsay tonga ary noraisina tany Mexico City tamin'ny farany, nalefan'ny governemantan'i Benito Juarez ho sesitany. Maximimon sy Carlota vadiny, zanakavavin'ny mpanjakan'i Belon'i Leopold I, tonga tany Meksika mba hitondra ny maha-mpanjaka sy empress azy tamin'ny taona 1864. Benito Juarez dia tsy nanakana ny politikany nandritra ny vanim-potoana tamin'izany, fa nanetsika ny fanjakany any avaratra, amin'izay fantatra ankehitriny tahaka an'i Ciudad Juarez. Nahazo fanohanana avy amin'i Etazonia i Juarez izay tsy tia ny hevitra hoe mpitondra fanjakana eoropeanina tahaka ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Ny governemantan'i Maximilian nitazona an'i Napoleon III dia nandroaka miaramila Frantsay avy any Meksika tamin'ny taona 1866, ary naverin'i Juarez ny fandresena ny filoha tao an-tanànan'i Mexico.
Cinco de Mayo dia loharanom-panentanana ho an'ireo Meksikana nandritra ny fibodoan'i Frantsa. Tamin'ny fotoana izay nanehoan'ny Meksikana herim-po sy tapa-kevitra teo anatrehan'ny hery Eoropeana lehibe iray dia nanjary mariky ny fieboeboana Meksikana, ny firaisankina ary ny fitiavan-tanindrazana izany ary tsaroana isan-taona ny fotoana.
Mankalaza ny Cinco de Mayo any Meksika
Cinco de Mayo dia fialan-tsasatra nasionaly any Meksika : ny mpianatra dia manana andro tsy ijerena any an-tsekoly, fa ny banky sy ny biraon'ny governemanta dia miovaova amin'ny fanjakana hatrany amin'ny fanjakana.
Feno fankalazana tany Puebla, izay nahitana ny ady an-tsehatra, dia nanosika ireo izay nitazona tany an-toeran-kafa tany Meksika. Ao Puebla dia ny fankalazana ny hetsika sy ny famerenana indray ny ady. Mianara bebe kokoa momba ny Cinco de Mayo ao Puebla .
Cinco de Mayo any Etazonia
Toa tsy mahagaga ho an'ireo Meksikana maro ny mahita ny fankalazana ny Cinco de Mayo miaraka amin'ny fanenjehana toy izany any Etazonia. Avaratry ny sisintany, ity dia lasa andro lehibe amin'ny fankalazana ny kolontsaina Meksikana, indrindra any amin'ireo vondrom-piarahamonina izay manana vahoaka be any Espaina. Fantaro ny sasantsasany amin'ireo zava-misy manoloana ny antony ankalazan'ny Cinco de Mayo bebe kokoa any Etazonia fa tsy any Meksika .
Indraindray ny fomba tsara indrindra ankalazaina dia amin'ny fanipazana ny antoko-antokony - dia afaka mandamina ny zava-drehetra ho an'ny mombamomba anao manokana ianao. Ny fiaraha-mientana Meksikana iray dia mety mahafinaritra ho an'ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra.
Na manomana fialamboly kely na antoko lehibe iray ianao, dia misy loharano maro hanampiana anao handamina tsara ny antoko anao. Avy amin'ny fanasana amin'ny sakafo, mozika ary fanangonana, misy loharano sasany amin'ny fanipazana antoko Cinco de Mayo .
Inona no dikan'ny hoe Mordida ao Meksika?
Tokony hanandramana ny hanina ao amin'ny faritra Yucatan any Meksika
Meksika mipongatra tsara indrindra
5 amin'ireo Park RV tsara indrindra any avaratr'i Meksika Avaratra
Nahoana i Tamil Nadu no tsara indrindra ho an'ny mpivarotra vehivavy solo any India
Firenzecard: Pasitera 72 ora mankany Florentine Tantara
8 Fomba tsotra hitahiry amin'ny Theme Park Tickets Ity fahavaratra ity
St. Helena Kalifornia
Ahoana ny fomba hanomanana fialan-tsasatra amin'ny fianakaviana Karibeana
Maui Nightlife - zavatra atao any Maui, Hawaii amin'ny alina
Lisitry ny fahavaratry ny fahavaratra sy ny fahavaratra ho an'ny Gardes Michigan
Tsy hino ireo sampana misy ao amin'ireto fiaramanidina ireto ianao
Mandehana milalao an-jatony any Brooklyn Aprily ka hatramin'ny Novambra, eo ambanin'ny $ 30 isam-bolana
Mpanjono latabatra atsinanana: Dining, Dating and Courting